Maalinta: Sebtember 1, 2017
Gaadiidka dadweynaha ee Samsun waa fasax lacag leh!
Dawlada Hoose ee Magaaladda Samsun ma sii wadin codsiyada safarka bilaashka ah inta lagu gudajiro Ciidul Adxaa. Khidmadaha gaadiidka dadweynaha sida taraamyada iyo basaska Samsun waxaa lagu sameyn doonaa sicir caadi ah inta lagu jiro fasaxa. Dawlada Hoose ee Samsun [More ...]
Afar Meelo Meelo Lagu Beddelayo Meelo Ka Muuqda Moscow
Tareenka Bartamaha Magaalada Moscow (khadka taayirka-qaabeeya shebeel u eg Moscow) ayaa kuxiran doona afar xarumood oo tareenka xNUMX ah. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Waaxda Gaadiidka ee Moscow Xamid Bulatov, wareysi uu ku daabacay bogga 'm2020 portal' ee magaalada Portal [More ...]
Maanta taariikhda: 1 September 2008 152 ee Railways. Ururka ...